Ho an’ny biby sy ny olony ao Nepal taorian’ny horohorontany, manafaingana fanasitranana ny fitiavana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2015 8:11 GMT
Ity omby ao an-tanànakelin'i Kaskikot, Nepal, ity dia niangana tamin'ny horohorontany nahatratra vaika 7.8 tamin'ny avrily teo fa tombanana ho 55.000 ny biby tao amin'ny toeram-piompiana ary atsasa-tapitrisa ny vorona maty tamin'izany. Tsapa hatrany anaty lalina any ny fahaverezana any amin'ny toerana heverina ho toy ny fianakaviana ny biby fiompy. Sary: Laura Spero. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra radio ity dia avy amin'i Laura Spero ho an'i The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 29 Aogositra 2015, ary nivoaka ato indray noho ny fifanarahana fifampizaram-botoaty.
Raha misy omby rana teraka ao amin'ny tanàna Nepali ao Kaskikot, dia karakaraina toy ny fahaterahan'olombelona izany. Androany izaho sy i Aamaa, izay iarahako mipetraka, mahandro sakafo manokana ho fanomezam-boninahitra ny fahaterahan'i O’Neil, omby rana teraka tamin'ny herinandro lasa teo. Nanao vary godrogodro izahay [vary andrahoana amin'ny ronono].
Misy fifandraisana malefadefaka eo amin'ny olona sy ny biby eto Nepal. Ain'olona manakaiky ny 9000 no nindaosin'ny horohorontany tamin'ity taona ity ary tombanana ho 55.000 ny biby tao amin'ny toeram-piompiana ary atsasa-tapitrisa ny vorona maty tamin'izany, ary mipaka lalina na amin'ny olona na amin'ny biby tokoa izany fahaverezana izany. Indrindra fa amin'ny tanànakely tahaka an'i Tripureswor, 150 kilaometatra atsinanan'ny tranon'i Aamaa, izay rava avokoa ny trano 947 tao.
Misy mponin'i Tripureswor antsoina hoe Binda Thapa manana ny sarin'ny traony taorian'ny fihovitrovitry ny tany — korotanmbato ahitana tafo fanitso roa eo amboniny. Nilaza izy fa tafahitsoka tao ambaniny tao nandritra ny ora maromaro ny omby rana nananany, ary lasa haolo herinandro maromaro taorian'izany. Nisy aza fotoana tsy nanome ronono araka ny notombanana izy. Angamba noho ny tahotra na noho ny dona nahazo azy, hoy ny eritreriny.
Niara-niaina tamin'ity vehivavy ity, izay nantsoiny hoe Aamaa, i Laura Spero, mpanatontosa lahatsary ary tao amin'ny tanàna ambanivohitr'i Kaskikot tao anatin'ny 12 taona teo ho eo izay. Saripika : Laura Spero. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Manana anjara toerana iankinan'ny ain'ny tambanivohitra Nepali ny biby fiompy. Nompiana hahazoana ronono ny omby rana, ary atao zezika ny tain'omby ary afangaro amin'ny fotaka hatao feta hananganana tranovato nentin-drazana. Amidy noho ny henany ny osy, ampitarihina sarety ny omby ary manome ny atodiny ny akoho. Mandany ny androny amin'ny fikarakarana ny biby fiompiny ny olona tahaka an'i Aamaa sy Binda, manomboka amin'ny teri-ronono vao maraina, dia manapaka bozaka hamahanana azy ireo ary mitondra izany ao anaty entambe rehefa mody isaky ny tolakandro.
Tsy maintsy mitia ny biby fiompinao mihoatra noho ny zanakao sy ny havanao ianao, hoy i Aamaa tamiko. Asa be no atao amin'io — manapaka vilona ho azy, mahandro hanina ho azy, manala ny tainy imbetsaka ao anatin'ny indray andro hiala amin'ny valany mitafo. Ny valisoa amin'ny fanomezana izany fitiavana izany dia ny fanomezany hanina ho antsika olombelona.
Ary tsy ny olombelona ihany no mijaly rehefa marary ny biby fiompiny. Marina ihany koa ny mifamadika amin'izany. Manana mpikarakara manokana tahaka an'i Binda ny biby fiompy, izay mamerina amiko ny resadresaka am-pitiavana ifanaovany amin'ny biby fiompiiny isan'andro rehefa miverina avy any an-tsaha izy.
“Tahaka ny reninay itony biby itony,” hoy i Nabin Thapa, izay very osy telo sy zanak'omby rana iray nandritra ny fihovitrovitry ny tany tao an-tanànan'i Tripureswor. “Misotro ny rononony izahay dia mahamatanjaka kokoa. Eny fa na dia ny zokiolona eto aminay aza dia toy ny zazakely amin'izy ireo.” Sary: Laura Spero. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Ren-dry zareo aho dia mamaly izy ireo, “Tonga ny olombeloko!” “Izay angamba no lazainy, ‘Tonga ny reniko! Omeo zavatra hohanina aho!’” hoy i Binda. Ka dia mikohokoho amin'izy ireo ravehivavy, manondraka vilona eo aminy sady miteny hoe, “Hey ry zalahy, nanao zavatra tsara ve ianareo ry kely isany?” Ary dia mamaly izy ireo hoe “baaa,” “meh meh,” “moooo…”
Ny dikan'izany rehetra izany dia hoe raha misy biby maty nandritra ny fihovitrovitry ny tany ny olona mpiompy azy, dia tahaka ny very havana izany. Ary marina amin'ny andaniny sy ny ankilany izany fahatsapana izany.
Izany eo ihany, mijery azy ianao, hoy i Nabin Thapa, izay maty nandritra ny horohorontany ny osiny telo sy ny zanak'omby rana aziatika iray, tahaka ny reninay ireo biby ireo. “Misotro ny rononony izahay dia mihamatanjaka kokoa. Eny fa na dia ny zokiolona eto aminay aza dia toy ny zazakely amin'izy ireo.”
Nanainga ny sorony izy ary nanampy teny hoe, “Tsy misy olona manontany anay hatramin'izao hoe firy ny isan'ny biby fiompinay maty. Faly aho fa nanontany ianao.”
Koa satria miorina indray ny tanàna kely tahaka an'i Tripureswor, dia navela irery tao amin'ny fahavoazany tao ny olona sy ny biby. Mandritra izany fotoana izany, rehefa niverina tany Kaskikot,eo ampikarakarana fombafomba manandanja izaho sy i Aamaa: fankalazana aina vaovao.
Hatramin'ny nahaterahan'ny zanak'omby O’Neil 11 andro lasa izay, dia tsy nanafangaro ny ronono masin'ny reniny tamn'ny sakafonay hafa izahay. Amin'ny andro faha-11 izahay no manao fety fanomezana anarana ny zanak'omby, tahaka ny ataontsika amin'ny olombelona. Ankehitriny izahay afa-misantatra ny rononony amin'ny sakafonay isan'andro. Atao amin'ny vary godrogodro izany [raha amintsika Malagasy dia izay ilay hoe vary amin-dronono… fa tsy misy tantely ny an-dry zareo].
Miankina amin'ny rindrin'ny lakozia vita amin'ny tany i Aamaa. “Itony vatana beazinay itony,” hoy izy, “dia vatana tahaka ny antsika ihany.”
Ity vary amin-dronono iray vilany ity dia manamarika andro lehibe eo amin'ny fiainan-tokatranon'i Aamaa — ny fampiasana voalohany ny rononon'ny omby ranany 11 andro taorian'ny niterahany ny zanak'omby iray vaovao. Ny fitazonana fombafomba tahaka itony dia iankinan'ny aindehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana taorian'ny fihovitrovitry ny tany mahafaty tamin'ny volana avrily lasa teo. Sary: Laura Spero. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI